LA RÉCONCILIATION LA PLUS RIDICULE DE L’HISTOIRE · L'Homme, son aura et son évolution
> LA RÉCONCILIATION LA PLUS RIDICULE DE L’HISTOIRE
3 réponses à “LA RÉCONCILIATION LA PLUS RIDICULE DE L’HISTOIRE”
4 août, 2016 à 9:33
Io » Fampihavanana » voalaza eo ambony io moa nalaina tahaka tamin’ny Réconciliation an-dry zareo Frantsay tany amin’ny 200 taona lasa (1814).
Na ny « devise » nitondrana azy aza nadika be fahatany koa : » Pardon, oublie ».
Ny itovizany aloha samy tsy nahomby izy roa,
Tsy nahazo ny fitokisan’ny vahoaka i Louis XVIII izay mpanjaka napetraky ny Réconciliation, nialan’ny tafika ka voatery nandositra 1 taona monja taorian’ny nandraisany ny fahefana noho ny fiverenana’i Napoléon. » Le mécontentement des Français et les ambitions irrésolues de Napoléon favorisent le retour de celui-ci. Le 1er mars 1815, il débarque à Golfe-Juan et, le 20, arrive triomphalement à Paris alors que Louis XVIII, abandonné par l’armée, doit s’enfuir une fois de plus à l’étranger (tiré sur lelephant-larevue.fr) »
Ny mahasamihafa azy kosa, fikatsahana ny metimety kokoa ho an’ny firenena no nanosika an’ireo nanomana azy izay ahitana ny fahefana mpanao lalàna ho an’i Frantsa, fikendrena tombontsoan’olom-bitsy sy fandetehana ny firenena ho amin’ny lalina kokoa no hita nisongadina tao amin’ilay fampihavanam-pirenena nokononkononina olona 5 monja teto Madagasikara.
Hitady Tsy hilamina intsony isika, mety hisara-bazana tanteraka raha ampiharina eto iny fehin-kevitra tapak’izy 5 lahy tamin’ny 2015 iny, ary hitady fampihavanana hatrany hatrany. Izany hoe hametraka olana tsy manam-pahataperana iny fehin-kevitra iny, ankoatry ny olana hafa.
Izay ny olana fa hiresaka ny vahaolana indray isika.
Andriamanitra no vahaolana sy mpamaha olana fa tsy ny mpitondra fivavahana,
Mila mihavana amin’Andriamanitra aloha isika, ary ary voalohany amin’izany ny fanomezana ny fitondrana ho an’ny olona notendren’Andriamanitra, araka izay voasoratra ao amin’ny faminan’i Isaia 9 : 5-6 « Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; Ary ny fanapahana dia eo an-tsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain’ny mandrakizay Andrian’ny fiadanana. 6Ny handrosoan’ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana Eo amin’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin’ny rariny sy ny hitsiny hatramin’izao ka ho mandrakizay; ny fahasaro-piaron’i Jehovah, Tompon’ny maro, no hahatanteraka izany. »
Marihiko fa ny mpanoratra ihany ity Davida voalaza eto ity, fa i Davida mpanjakan’i Israely ihany izy no niverina, tsy ditrany na haitraitrany fa noho ny tendrin’Andriamanitra tsy azony lavina.
Mitovy amin’izany koa ny voasoratra ao amin’ny bokin’ny salamo izay nanoratany sahady tany amin’ny 3000 taona lasa an’izao fiainana diaviny ankehitriny izao,diavin’ny mpanoratra raha hazavaina kokoa.
Mazava ny voalazany ao amin,ny salamo 2 : 6 « Izaho kosa efa nanendry ny Mpanjakako Tambonin’i Ziona, tendrombohitro masina. », Ampahany nalaina avy amin’ireto andinin-teny ireto :
» 1Nahoana no mitabataba ny jentilisa, ary misaina hevi-poana foana ny firenena? 2Ireo mpitondran »ny tany mitsangana, Ary ny mpanapaka miara-mioko hanohitra an’i Jehovah sy ny Mesiany ka manao hoe: 3″Aoka hotosantsika ny famatorany, ka hariantsika hiala amintsika ny famehezany. »
4Izay mipetraka any an-danitra mihomehy, ny Tompo maneso ireo. 5 Dia hiteny azy amin’ny fahavinirany Izy ka hampangorohoro azy amin’ny fahatezerany hoe: 6″Izaho kosa efa nanendry ny Mpanjakako Tambonin’i Ziona, tendrombohitro masina. »
Maro loatra ny teny milaza an’izany voasoratra ao amin’ny baiboly, ka tsy ho voatanisa vetivety eto.
Fa efa maka tahaka ny frantsay ihany isika, hiresaka restauration ?
Azo ekena ny fampihavanana raha ny tenanay manoratra no ho Louis XVIII, omeo an’i Louis XVIII aloha ny fahefana, izany hoe miala ny mpitondra fa tsy nahomby, dia horaisiny an-tanana sy ara-dalàna ny fitondrana ny firenena sy ny fampihavanana,
Tsy misy Napoléon atahorana ka hampandositra ihany koa, fa izy tenany efa Napoléon, tsy taranak’ireo mpamoritra sy mpanavakavaka firazanana teto amin’ny firenena, zanak’Andriamanitra tahaka ny mpiray tanindrazana aminy.
Ary tsara toerana kokoa ny tenako raha fampihavanana no horesahina.
Atsipy ny tady eny an-tandroky ny omby, atsipy ny teny any am-pon’ny mahalala
24 août, 2016 à 10:47
Tsy mpikambana amina antoko politika,
Azo antoka fa tsy hitongilana,
Tsy mpikambana amina antokom-pinoana,
Ho voahaja arak’izany ny laïcité de l’Etat,
Hitovy ny fitondrana ny fiangonana sy ny fironam-pinoana tsirairay, na fiangonan-dehibe, na fiangonana zandriny, na finoana kristiana na tsy kristiana, na mpandala ny fomban-drazana na tsia.
Ka tsy ho entam-barotra sy ho tohatra fiakarana intsony ny mpino sy ny fiangonana.
Finiavana no hahavitana an’izany, ary indrindra ny fitantan’Andriamanitra, na tsy hanana fahefana mivantana ao amin’ny fahefana mpanatanteraka aza,
Hanana ny teny farany kosa hampanajana an’izany araka ny lalàna sy ny sitrapon’ny ao Ambony.
7 mai, 2018 à 10:05
Ity olona afaka hanaja ny lalam-panorenana sy ny tsy fitongilanan’ny fanjakana amina antokom-pivavahana, nefa hanaja azy ireo ity kosa, tsy iza fa ny voahosotr’Andriamanitra hitondra ny firenena.
Ny Mesia, izay tafiditra ao antin’ny lalampanorenana tsara.
Hitahy ny Zanahary, araky ny fangatahantsika ao amin’ny hiram-pirenene : « Tahionao ry Zanahary… » ; « Zanahary o, tahio… »
Eken’ny lalampanorenana tsara izany ny fitondrana hatsangan’Andriamanitra.
Ary i Cyrius Isaia 45, 1-3… no hitarika azy, izay tsy iza, fa ny mpanoratra.
Hisy sahy handa an’Andriamanitra ve ?
Izaho aloha tsy sahy.